Pireezidaanitii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Shumalis Abidisaa
Yaa’ii idilee Caffee Oromiyaa walga’uudhaan madda jeeqama dhiheenya kanaa fi furmaata isaa, ka jedhu irratti mari’atee jira. Rakkoo fi gadadoo uummata Oromoo kanneen dheeressuu gareeleen baribaadan jal’aa Oromootti fayyadamuun ammas lammaffaa deebii'uu yaala jiru, jedhan Pireezidaanitiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shumalis Abidisaa dubbatan.
Qaamolee lama kan "ABO shanee" jedhanii waamanii fi Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigiraay maqaa dhahuun akka madda rakkoo kanaa tahanitti himatanii jiru. Addi Bilisa Baasaa Uummata Tigiraay immoo gama isaatiin, “gaaffii uummataaf deebii kennuu dhiisanii akka rakkoo jiruuf sababaa taaneetti quba nutti qabuun barbaachisaa miti,” jedhan.
Dura-taa’aan Kongiresa Federaalwa Uummata Oromoo, Proofeesar Mararaa Guddinaa, “mootummaan warra kaanitti quba qabuu irra dhibee keessa isaa furatee, marii siyaasaa biyyoolessaa hunda hirmaachise qopheessuu qaba,” jedhan.
Keeniyaan Manneetiin Dhugaatii ‘Farsoo’ Akka Hin Gurgurre Uggurte
Sirni Yaadannoo Miseensa Mana Maree fi Qabsaa’aa Mirga Namaa Ameerikaa Kan Joon Lewis Geggeessamaa Jira